IGeneral Motors izokweseka umnotho wase-US | Ezezimali Zomnotho
IGeneral Motors izokweseka umnotho waseMelika kanye noDonald Trump
UJulio Moral | | Umnotho jikelele
Ukufika kukaDonald Trump eWhite House bekungekho ngaphandle kokuphikisana. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule umongameli omusha wase-United States wamemezela "impi" eMexico ngezimemezelo zakhe. Kodwa leli lizwe bekungelona lodwa elathola "umdlwenguli" kulesi sicebi.
Futhi izinkampani eziningi, ikakhulukazi emkhakheni wezimoto, "zazisongelwa" ngesikhathi uTrump "emema" la mazwe ngamazwe ukuthi enze imikhiqizo yawo e-United States. Ngokuphambene nalokho, kuzodingeka babhekane nezindleko ezinkulu.
Njengoba kunikezwe ithuba lokufakwa kwalezi zinyathelo, Impendulo yeGeneral Motors isheshe. Inkampani yezimoto enkulu kunazo zonke emhlabeni, enendlunkulu yayo eDetroit, imemezele esidlangalaleni ukuthi izophinde yongeze imali eyizigidigidi ezi- $ 1.000 emafemini ayo akhiqiza i-US.
IGeneral Motors nayo inezindawo eziningana eMexico, lapho ekuqaleni bebehlela ukukhuphula ukukhiqizwa. Kodwa-ke, ngesimemo esimnandi sikaDonald Trump, inkampani ishintshe umqondo wayo, ngaleyo ndlela yadlulisela iningi lomkhiqizo e-United States.
1 IMichigan, indawo enkulu yokukhiqiza izimoto
2 Izinzuzo eziningi ze-United States
2.1 Umkhakha wezimoto uzokhula kakhulu
IMichigan, indawo enkulu yokukhiqiza izimoto
Ngemuva kwesinqumo esenziwe ngabaholi bakwaGeneral Motors, ikomkhulu laso eliseDetroit, eMichigan, lizoba ngomunye wamafemu ahamba phambili emhlabeni ekukhiqizeni izimoto, ngenxa yemali eyengeziwe leyo nkampani ezotshala yona ekwenzeni izimoto e-United Izwe.
Ngakho konke lokhu, abakwaGeneral Motors balinganisela lokho izokwakha imisebenzi emisha engaba ngu-7.000 XNUMX, yize utshalomali luzophinda futhi lwenze izinhlobo ezintsha zezimoto, kanye namadivayisi anobuchwepheshe obuthuthukisiwe azofakwa kuzo.
Ngokunjalo, ngenxa yale mali, inani elikhulu lezinto elizovuselelwa ukuze izimoto zakwaGeneral Motors zivuselelwe ngokuphelele futhi zihamba phambili emakethe.
Ngaphezu kwalokho, umongameli kanye ne-CEO yale nhlangano, uMary Barra uchaze ukuthi indlunkulu yaseMichigan izokhethwa ukuze kwenziwe ama-ekseli amasha azoba yingxenye yesizukulwane esilandelayo samamodeli wokulanda.
Lesi sinyathelo sizokwandisa abasebenzi abakhona njengamanje ngabasebenzi abangama-450, okusho ukudlulisela e-United States inani elikhulu lemisebenzi ebitholakala eMexico.
Izinzuzo eziningi ze-United States
Iqiniso ukuthi isinqumo esenziwe yiGeneral Motors izosiza kakhulu umnotho wezwe ENyakatho Melika. Ngo-2016 inkampani yayivele imemezele ukuthi izotshala imali eMelika cishe ama-dollar ayizigidi ezingama-3.000 ukwenza izinqubo zokukhiqiza zezimoto zayo. Manje, banqume ukungeza ezinye izigidi eziyinkulungwane kule mali.
Ngaphezu kwalokho, ezitatimendeni zakhe, uBarra ukhumbule ukuthi eminyakeni emine eyedlule, iGeneral Motors isungule imisebenzi emisha ecishe ibe ngama-25.000, okusho ukuthi kutshalwe imali engaba yizigidi ezingama-3.000 XNUMX zamaRandi maqondana namaholo, kanye nokukhokhwa kwentela, phakathi kwezinye imisebenzi yezomnotho esize izwe manje eliphethwe nguDonald Trump.
Ukungeza lokho kusuka ebhizinisini, ikhethe ukukhula e-United States njengoba lesi sizwe sikuthatha njengemakethe yasekhaya. Konke lokhu kudale ukwanda okukhulu kwemisebenzi ezweni, njengoba inkampani isisike abantu abasebenza kwezinye izifunda, kubasebenzi ababalelwa ku-15.000.
Kuphinde kwaholela ekwandeni kwenani lezindawo ezidayisa impahla kanye nokwenyuka kwabahlinzeki nabathengisa emkhakheni wezimoto jikelele. Ngokufanayo, abaninimasheya bahlomulile ngokwenza lesi sinqumo.
Umkhakha wezimoto uzokhula kakhulu
Iqiniso ukuthi ngezinyathelo ezintsha ezamukelwe abaholi bakwaGeneral Motors, i-United States, eminyakeni ezayo, izoba ngelinye lamazwe lapho umkhakha wezimoto ukhula khona.
Ukwenziwa kwemikhiqizo yale nkampani ezweni kuzoletha inzuzo enkulu kwezomnotho ngenxa yokuthengiswa kwalezi zimoto, phakathi kokunye. Ngaphezu kwalokho, kuzosiza ukudala inani elikhulu lemisebenzi phakathi kwezakhamizi zase-US, njengoba kulindeleke ukwanda okukhulu kwabasebenzi. ukufinyelela inani labasebenzi abangu-5.000 XNUMX ngaphezulu.
Ngamafuphi, ukuphatha izimali zethu kulo nyaka ka-2017, bekungeke kube buhlungu uma singabheka iqhaza izinkampani eziningi ezizolithatha ngokunikela usizo lwazo embonini yaseNyakatho Melika ngaphansi kwegunya likaTrump.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » IGeneral Motors izokweseka umnotho waseMelika kanye noDonald Trump
Ezinye izindlela zokutshala imali ukwenza ukonga kube nenzuzo
Umphumela weBrazil ungakuthinta kanjani ekutshalweni kwemali?